MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA JABAANIISKA AKITA INU DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Jabaaniiska Akita Inu Dog
Japanese Akitas, Tamami iyo Akemi
Liistada Eeyaha Akita Isku Darka
Waxaa jira laba nooc oo Akitas ah, asalka Jabbaan ee Akita imikana magac gaar ah ayaa loogu talagalay Heerka Mareykanka Akitas . Miisaannada iyo cabirradu way kala duwan yihiin, heerka Mareykankuna wuxuu oggol yahay maaskaro madow, halka jaangooyada asalka ah ee Japan aysan oggolaanayn maaskaro madow. Sida laga soo xigtay FCI, Japan iyo dalal kale oo badan oo adduunka ah Akita Ameerika waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay nooc ka duwan Akita Inu (Japanese Akita). Mareykanka iyo Kanada, labadaba Akita Ameerika iyo Akita Inu waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal nooc oo leh kala duwanaansho nooc halkii laga heli lahaa laba nooc oo kala duwan.
Ey Japanese weyn
AH-ki-ta (ku dhawaaqida Japan ee saxda ah, iyada oo xooga la saarayo dhawaaqa koowaad)
a-KEE-ta Inu (ku dhawaaqida Galbeedka)
Noocyada ugu weyn ee noocyada Jabbaan Spitz ah, Akita, ee loogu dhawaaqo a-KEE-ta, waa eey awood badan, adag, si fiican u dheelitiran oo muuqaal ahaan u muuqda. Xoog iyo muruq leh oo leh fidsan, madax culus iyo xoog, muuska gaagaaban, Akita wuxuu leeyahay laab dheer, balaaran iyo dhabarka heerkiisa. Eyga ayaa waxyar ka dheer kan dheer. Madaxa waa qaab saddex geesood leh, ballaadhan oo aflagaado ah. Joogsiga, oo ah aagga kala-guurka ee dhakada dambe ee muuska, si wanaagsan ayaa loo qeexay. Furro gacmeedku wuxuu si fiican u fidiyaa wejiga. Dheguhu way yar yahiin oo way kacsan yihiin, horay ayaa loo qaadaa oo waxay la jaanqaadaan qoorta. Indhaha madow ee mugdiga ahi waa qaabab yar yar oo saddexagal leh. Sanka waa mid balaaran oo madow. Bunga ayaa loo oggol yahay Akitas cad, laakiin madow ayaa laga door bidaa. Dibnaha way madowyihiin carrabkuna waa casaan. Ilkaha waa xoog badan yihiin waana in ay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah (maqas waxaa doorbida kuwa sameeya badankood). Dabada ayaa ah wax lagu raaxaysto waxaana lagu qaaday eeyga dhabarkiisa. Cagaha webbeddu waa sida bisad oo kale. Akita waa mid laba jibbaaran. Dharka kore waa kuwo adag oo aan biyuhu xirin. Koodhka hoose waa mid qaro weyn oo jilicsan, oo siinaya dahaar wanaagsan eeyga ee xilliga qabow. Midabada koofiyaddu waa cadaan saafi ah, casaan, sisin, bir iyo cows. Midabada waa inay ahaadaan kuwo aan lahayn xuduudo cad. Maaskaro madow waa mamnuuc.
Akita waa mid deggan, caqli badan, geesi ah oo aan cabsi lahayn. Si taxaddar leh oo aad u jecel qoyskiisa. Mararka qaar iskaa wax u qabso, waxay u baahan tahay shirkad, kalsooni, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada . La'aanteed eygu wuxuu ahaan doonaa aad ula kac ah oo waxay noqon kartaa mid aad u dagaal badan eeyaha iyo xayawaanka kale. Waxay ubaahantahay tababar adag sida eey. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaadho xaalad hoggaamiye xidhmo . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Haddii eeyga loo oggolaado inuu aamino inuu isagu yahay hoggaamiyaha ka sarreeya aadanaha waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid aad u cunno badan maadaama uu dadka u sheegayo inay iyagu markooda sugaan. Isagu wuu cunaa horta. Akita Inu waa eey fasalka koowaad ah. Hooyooyinka reer Japan waxay inta badan carruurtooda uga tagi doonaan daryeelka qoyska Akita. Aad bay aamin u yihiin waxayna ku barwaaqoobaan hogaaminta adag ee kuwa iyaga maamula. Xaqiiqdii waa in lala socdaa xayawaannada kale ee guryaha lagu haysto iyo carruurta. In kasta oo noocyadu u dulqaadan karaan oo ay la wanaagsanaadaan carruurta ka soo jeeda qoyskiisa, haddaadan barin eeygan wuu ka hooseeyaa dhammaan bini-aadamka amarka la soo saaray laakiin ma aqbali karo carruurta kale iyo haddii lagu kaftamo, Akita ayaa qaniini kara Carruurta waa in la baro in ay muujiyaan astaamaha hoggaaminta isla markaana ay eyga u ekaadaan. Nooca saxda ah ee milkiilaha, qadarka saxda ah ee jimicsi maskaxeed iyo jireed maalin kasta iyo tababar adag, waxay sameyn karaan xayawaan rabaayad ah. Tababbarka adeecida wuxuu u baahan yahay dulqaad, maadaama eeyadan ay u muuqdaan inay si deg deg ah caajisaan. Akita Inu wuxuu ubaahan yahay inuu la joogo qoyskiisa. Waxay ku dhawaaqeysaa dhawaqyo badan oo xiiso leh, laakiin maahan xanaaq xad dhaaf ah.
bulldog american american bully mix
Dhererka: Eyda 24 - 26 inji (61 - 66 cm) Dumarka 24 - 26 inji (61 - 66 cm)
Miisaanka: Eyda 75 - 120 rodol (34 - 54 kg) Dumarka 75 - 110 rodol (34 - 50 kg.)
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia, labadaba hypothyroid iyo autoimmune thyroiditis, cudurada difaaca sida VKH iyo Pemphigus, dhibaatooyinka maqaarka sida SA iyo indhaha (PRA, Micro, entropion) patella iyo dhibaatooyinka kale ee jilibka.
Akita Inu si caadi ah kuma sameyn doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Si dhexdhexaad ah ayuu gudaha ugu shaqeeyaa oo wuxuu ku fiicnaan doonaa daarad weyn.
Akita Inu wuxuu ubaahan yahay jimicsi dhexdhexaad ah laakiin joogto ah si uu qaabkiisa ugu ekaado. Waa in loo qaataa socod dheer maalinle ah .
Qiyaastii 11-15 sano
3 - 12 eeyo, isku celcelis 7 ama 8
Koodhka adag, adag, ee gaaban wuxuu u baahan yahay qurxin muhiim ah. Ku caday burush adag, oo maydh kaliya marka gebi ahaanba lagama maarmaan tahay sida maydhashada ay ka saareyso biyaha ka hortagga dabiiciga ah ee jaakadda. Noocani wuxuu si xoogan u daadiyaa laba jeer sanadkii.
Akita Inu wuxuu ku dhashay jasiiradda Honshu oo ka tirsan gobolka Akita ee Japan, halkaas oo aan qowmiyado badnayn. Akita Inu waxaa loo tixgeliyaa eeyga qaranka ee Japan waana mid ka mid ah toddobada nooc ee loo qoondeeyay inay tahay Taallo Taariikhi ah. Noocani wuxuu lahaa adeegsiyo badan, sida booliska iyo shaqada milatariga, eey waardiye ah (dowlad iyo shicib), eey dagaallama, ugaadhsade orso iyo deero iyo eey sled ah. Akita Inu waa eey ugaarsi badan, oo awood u leh inuu ugaarsado cimilada xun. Afka jilicsan ee Akita ayaa u suurta gelinaya inuu u shaqeeyo eey soo-celinta shimbiraha. Eyga waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid muqadas ah oo nasiib wacan ku leh waddanka Japan. Astaamaha yaryar ee Akita Inu waxaa badanaa la siiyaa waalidiinta cusub ka dib markay dhalaan carruurtu inay muujiyaan caafimaad wanaagsan iyo dadka jiran oo ah astaan ​​caafimaad soo kabasho deg deg ah. 1937 kii kii ugu horreeyay ee Akita, oo loogu magacdaray Kamikaze-go waxaa keenay Mareykanka Helen Keller. Eygu wuxuu ahaa hadiyad la siiyay intii ay ku jirtay safarka Akita. Kamikaze-go waxay u dhimatay cudurka canine distemper waqti aan dheerayn ka dib markii ay korsatay. Bishii Luulyo 1938 kii Akita kale oo la odhan jiray Kenzan-go, oo walaalkii ka weynaa Akitakeedii ugu horreeyey, ayaa loo siiyey hadiyad rasmi ah oo ka timid dawladda Japan. Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib shaqaale badan ayaa u keenay Akita Inu eeyaha Mareykanka.
Waxaa jira laba nooc oo Akitas ah, asalka Jabbaan ee Akita imikana magac gaar ah ayaa loogu talagalay Heerka Mareykanka Akitas . Miisaannada iyo cabirradu way kala duwan yihiin, heerka Mareykankuna wuxuu oggol yahay maaskaro madow, halka jaangooyada asalka ah ee Japan aysan oggolaanayn maaskaro madow. Sida laga soo xigtay FCI, Japan iyo dalal kale oo badan oo adduunka ah Akita Ameerika waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay nooc ka duwan Akita Inu (Japanese Akita). Mareykanka iyo Kanada, labadaba Akita Ameerika iyo Akita Inu waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal nooc oo leh kala duwanaansho nooc halkii laga heli lahaa laba nooc oo kala duwan. Jabaaniyiinta Akita waa wax aan caadi ka ahayn wadamada badankood.
Kooxda Waqooyiga, Kooxda Shaqada ee AKC
AKIHO = Akita Inu Hozonkai
JKC = Naadiga Kennelka Japan
JACA = Naadiga Japan Akita ee Mareykanka
WUAC = Ururka Caalamiga ah ee Naadiyada Akita
'Kani waa dhalashadeyda Japanese-ka ah ee Akita ee loo yaqaan Boston (isagu ma ahan American Akita ). Isagu waa wada cad yahay oo inyar oo kareem ah lagu dhex tuuray. '
Boston waa reerka Japanese-ka ah ee Akitaarka ah ee asalka ah markii uu jiray 2 sano— Wuxuu jecel yahay inuu socod ku maro xeebta oo uu fiiriyo biyaha oo eryo hirarka. Waa eey layaableh culayskiisuna hadda yahay 88 rodol. Isagu wuxuu ula jeedaa dunida aniga.
Boston the Japanese Akita Inu at 3 sano jir culeyskiisu yahay 84 rodol
Boston Jabaaniyiinta Akita Inu oo jira 3 sano
Boston waa reerka Japanese-ka ah ee loo yaqaan 'Akita' oo ah ilmo yar oo 4 bilood jir ah
Lahaanshaha sawirka Akita Inu Isamashisa Ken
Macluumaadka Akita (Mareykan)
Noocyada Taranka Eeyaha Akita
chihuahua jack russell terrier iskudhaf
4 bil jir bulldog Faransiiska
3 bil sawirada eey feeryahanka jir
shaybaarka iyo isku-darka bustaha yaryar